Fianarantsoa: Mamarana ny fankalazana ny faha-40 taona nisiany ny Oniversite
Mandalo eto an-toerana izao ny delegasiona avy tarihin'ny Praiministra.
Manatrika ny fitokanana fotodrafitrasa sy fanamarihana izany faha 40 taonan'ny oniversiten'i Fianarantsoa izay izy ireo.
Hatreto dia ao amin'ny faritra tantanan'ny oniversite ihany no izoran'izany fa tsy misy kosa hetsika famoriam-bahoaka ivelan'ireo toerana ireo.
samedi, 02 décembre 2017 09:11
Manakara: Sinoa mpandraharaha voaroba 2 miliara Ariary
Sinoa vavy iray mpandraharaha jirofo no notafihin’ny jiolahy enin-dahy tao an-tranony teny Mangarivotra – Manakara tampon-tanàna ny alin’ny talata hifoha ny alarobia 29 novambra, tamin’ny 4ora maraina.
Lasan’ireo jiolahy tamin’izany ny vola 2 miliara Ariary vao avy nalaina tany amin’ny banky.
Noratrain’ireo jiolahy ny lohan’ilay ramatoa Sinoa rehefa tsy nety namoaka vola. Nofiraina zava-maranitra ny mpiambina iray fa namaly saingy tsy maty.